Hoyga Xiaomi - SmartMe
Dom » Hoyga Xiaomi
Ma qiimeysaa wax soo saarka soo saarayaasha Shiinaha? Xiaomi Home waa taxane aalado casri ah oo fududeynaya in guriga oo dhan la xakameeyo. Sharad ku samee ilo la xaqiijiyay oo akhri macluumaadka ku saabsan horudhaca qalabka, iyo sidoo kale sharaxaad qoto dheer oo ku hadla, dareemayaasha, nalalka iyo sifaynta hawada.
Viomi S9 - Viomi-kii ugu horreeyay ee leh saldhig faaruq ah!
Halkan waxaa ah nadiifiye mootada aan aqaano. Laakiin kaliya ma ahan aalado caadi ah, laakiin aalado leh saldhig faaruq ah. Tanina sidoo kale waxay ka timid nidaamka deegaanka ee Xiaomi, maxaa yeelay waa aaladda loo yaqaan 'Viomi robot'! Kaliya faa'iidooyinka! 😀
Adeegso dhejis dheeri ah